Seranam-piaramanidina Hermes: fanitarana ny vavahady fidirana elektronika mandeha ho azy ao amin'ny seranam-piaramanidina Pafos
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Seranam-piaramanidina Hermes: fanitarana ny vavahady fidirana elektronika mandeha ho azy ao amin'ny seranam-piaramanidina Pafos
Septambra 14, 2017
Mifanaraka amin'ny fanoloran-tenany hanatsara hatrany ny serivisy, dia faly i Hermes Airport nanambara ny fametrahana sy ny fiasan'ny vavahady fidirana elektronika efatra (vavahady e-automatique) efatra amin'ity indray mandeha ity ao amin'ny Aéroport Pafos.
Ny vavahady elektronika efatra mandeha ho azy dia mijanona eo amin'ny faritra fidirana ary mety hanompo ireo mpandeha rehetra.
Ampahatsiahivina fa ny rafitry ny vavahady fidirana elektronika mandeha ho azy dia ahafahan'ny besinimaro mandeha, mitondra dika mitovy vita amin'ny paositry ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, hiroso mivantana amin'ny fisavana ary avy eo mankany amin'ny faritra fivarotana sy vavahady fiaingan'ny terminal.
Ny fizotry ny fampiasana an'ity rafitra ity dia tena tsotra ary mitaky ny scanning ny pass pass isaky ny mpandeha fotsiny. Ny rafitry ny vavahady elektronika mandeha ho azy, dia afaka manolotra mpandeha hatramin'ny 1,800 isan'ora, zava-misy izay antenaina handray anjara betsaka amin'ny fampihenana ny fotoana filaharana feno ho an'ny besinimaro mandeha.
Ary farany, marihina fa misy vavahady fidirana elektronika fito mandeha ho azy efa miasa sy miasa ho an'ny besinimaro ao amin'ny seranam-piaramanidina Larnaka.
Qatar Airways Cargo hanomboka serivisy mpitatitra entana any Pittsburgh, PA
WTTC Fizahan-tany ho an'ny rahampitso Awards 2018 dia manokatra ny fisoratana anarana
58 minitra lasa izay